Ololaha la dagaalanka Qaadka oo si xowl ah wali uga socda Magaalada Muqdisho – Radio Daljir
Abriil 23, 2015 7:32 b 0
Khamiis, Abriil 23, 2015 (Daljir) — Muqdisho ayaa waxaa xalay lagu qabtay kulan looga hadlay dhibaatada bulshada Soomaaliyeed uu ku hayo Qaadka iyo sidii looga wacyigelin lahaa, kulanka oo ka dhacay degmada Boondheer ee gobolka Banaadir.
Kulanka ayaa waxaa ka qayb-galay dhallinyaro iyo haween fara badan oo uu goobtaas kula hadlay Abuukar Cawaale Qaad-diid oo maalmahaan ku sugnaa Magaalada Muqdisho, kana waday olole looga soo horjeedo Qaadka.
Cawaale ayaa sheegay in kharash fara badan uu kaga baxo Somalia soo iibsashada Qaadka; isla markaana aanu dalka wax faa’ido ah kasoo gelin, laakiinse ay faa’iido badan ka helaan dalalka qaadka soo dhoofiya.
“Qaadku waa gumeysi casri ah oo maskaxdeena lagu weerarayo, maalkeenna laguna gurto, waxaana mudan in laga wada-hortago. Waxaana tusaale idiin kugu filan in waddamada uu ka baxo aysan dadkoodu cunin, balse ay u soo dhoofiyaan Soomaaliya si ay lacago badan oo adag uga helaan,” ayuu ku yiri Abuukar Qaad-diid hadal uu ka jeediyay kulanka.
Sidoo kale, Abuukar Qaad-diid ayaa sheegay in la doonayo in dhallinyarada Soomaaliyeed lagu gumeysto maskaxdooda, halka dhallinyarada dalalka uu ka baxo lagu dhiiri-geliyo wax-barashada iyo sidii ay dalkooda horumar weyn u gaarsiin lahaayeen.
“Muqdisho waa caasimaddii dalka waxaana doonaynaa in Muqdisho ay u noqoto tusaale gobollada kale ee dalka. Haddii Muqdisho ay qaadka joojiso waxaan hubaa in dalka intiisa kale oo dhan laga diidayo,” ayuu mar kale yiri Abuukar Qaaddiid oo ku dhawaaqayay erayo ay ka mid ahaayeen Qaadku ha Dhaco.
Ugu dambeyn, Abuukar ayaa sheegay inuu wado olole uu kaga soo horjeedo cunista iyo ka ganacsiga qaadka; isagoo intaas ku daray inuu soo maray gobollo ay ka mid tahay Puntland, uuna kala hadlay bulshadooda sidii ay jaadka isaga joojin lahaayeen, isagana wacyigelin lahaayeen dhibaatada uu leeyahay.
Dhalinyaro Soomaali ah oo Qorshaynayay ku biiritaanka ISIL oo USA lagu Maxkamadaynayo